Okraina: Lokaloka amin’i Youshchenko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2018 2:41 GMT
Mpisera LiveJournal chemikovsun (mpanao gazety Okrainiana, Andrey Chernikov) nanoratra [tamin'ny teny Rosiana] ny risika amin'ny filokàna amin'ny Filoha Okrainiana.
Tena mampihomehy ny mahita fa tena nisy tokoa ny loka [Rosiana] tao amin'ny Forum ny Ukrainska Pravda, iray amin'ireo tranonkalam-baovao Okrainiana malaza indrindra, izay naorin'i Georgiy Gongadze: ny maha-hentitra an'i Yushchenko no nahatonga ireo mpandray anjara telo tamin'ny forum hahazo vola 50 hryvnias (10 dolara amerikana), ary avo roa heny ho an'ny roa hafa. Very 200 hryvnias (40 dolara amerikana) ny iray tamin'ireo mpiloka izay tsy nino fa handrava ny parlemanta ny filoha,.
Fanontaniana iray manakaiky kokoa ny lalao filokana ny fitsapan-kevitra antserasera [Okrainiana] ao amin'ny forum Ukrainska Pravda. Anontaniana ireo mpamaky raha vonona hanohana ny Filoha hatramin'ny fandresena. Tamin'ireo mpifidy 154 antserasera, 132 namaly eny, 13 tsia ary 9 tsy miraharaha.
Ity ny hevitry ny olona iray miombon-kevitra amin'ny filoha. Mpisera LiveJournal skylump nanoratra [Rosiana] hoe: